DH-JL 2200mm lehibe famoahana maimaim-poana amin'ny famoahana printy - DH Flexo Printing
Vao tsy ela akory izay, ny mpanjifa dia nahavita ny fizahana ny fanekena ny milina fanontam-pirinty malalaka 2200mm ao amin'ny DH, ary halefa any amin'ny ozin'ilay mpanjifa ny masinina vaovao hametrahana azy.
DH-JL serie de presse flexo dia fitaovana fanontam-pirinty flexo noforonin'ny DH nandritra ny taona vitsy lasa teo ho an'ny tsena vidin-tsolika. Ny haavon-tsarimihetsika lehibe indrindra dia 2200mm, ny 1900mm ny isa farany indrindra, ary ny haavon'ny haavon'ny haavony dia 240m / min, izay afaka mamita ny ankamantatra indrindra amin'ny asa an-tsompitra karatra amin'ny tsena.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, nivelatra haingana tany Sina ny tsenam-barotra mialoha ny fanontam-pirinty. Raha oharina amin'ny teknolojia maoderina printy, ny fanontam-pirinty vita amin'ny carton dia afaka manatsara ny kalitao avoakan'ny vokatra, mampihena ny fiantraikan'ny fiasa fisasana, ary manamaivana ny fahasimbana amin'ny tolotra fanampiana post-print amin'ny baoritra.
Taorian'ny taona maro nanaovana fikarohana sy fampandrosoana, DH dia nametraka modely maromaro ho an'ny boaty efa vita printy, izay ny DH-JL no vokatra farany indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ankoatra ny mari-pankasitrahan'ny fanontam-pirinty, ny fisoratana anarana amin'ny fisoratana anarana ary ny hafa, dia misy ihany koa ny fanamafisana ny faneriterena fanerena fanontam-pirinty, izay manatsara ny fahatonian'ny faneriterena sy ny famokarana vokatra.
Fampahalalana bebe kokoa, tsidiho azafady www.donghang.cn/en
Press Tsindrio DH-FP tery flexo mankany Oganda